तीव्र गतिमा पृथ्वीतर्फ आउँदै धुमकेतु वैज्ञानिक दिए यस्तो चेतावनी - Nepal Insider
तीव्र गतिमा पृथ्वीतर्फ आउँदै धुमकेतु वैज्ञानिक दिए यस्तो चेतावनी
January 12, 2020 537
पाेखरा २७ पुस- सन् २०२० को पहिलो चन्द्रग्रहण समाप्त भइसकेको छ । चन्द्रग्रहण सकिएलगत्तै ठूलो आकारको धुमकेतु तीव्र गतिमा पृथ्वीतर्फ आइरहेको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । पृथ्वीतर्फ आइरहेको धुमकेतुको बारेमा अमेरिकी राष्ट्रिय हवाई यातायात तथा अन्तरिक्ष प्रशासन (नासा)ले जानकारी दिएको हो ।
खगोलशास्त्रीहरुले धुमकेतु पृथ्वीसँग ठोक्किएमा ठूलो प्रलय आउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । वैज्ञानिकका अनुसार उक्त धुमकेतुले जनवरी १२ मा पृथ्वीको नजिकैबाट पार गर्नेछ । नासाका अनुसार तेज रफ्तारमा आएको धुमकेतु पृथ्वीको कुनै पनि क्षेत्रमा ठोक्कियो भने समुन्द्री आधीसँगै प्रलय आउनेछ ।
नासाले उक्त धुमकेतुको नाम २०२० एबी२ दिएको छ । नासाले उक्त धुमकेतुको बारेमा एस्टेरोइड ट्र्याकिङ सिस्टमको माध्यमबाट पत्ता लगाएको थियो । धुमकेतु पनि सोलार सिस्टमकै एक हिस्सा हो । यो ढुंङ्गा, धुलो, बरफ र स–साना टुक्राहरुबाट बनेको हुन्छ । ग्रहले जस्तै यसले पनि सूर्यको परिक्रमा गर्छ । धुमकेतुमा बरफ, कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, एमोनिया, सिलिकेट र कार्बनिकको मिश्रण रहेको हुन्छ।
Prevईटहरीमा अचानक देखिए पुर्वराजा पृथ्वीनारायण शाह !
Nextपेट दुखेर अस्पताल पुगेका यी पुरुष गर्भवती भएको रिपोर्ट आएपछि
गाउलेले बल्ल खोले २० बर्से युबतिको ७० बर्से वृद्धसंग बिहे गर्नुको भित्री बास्तबिकता,यस्तो अचम्म(भिडियो हेर्नुहोस)
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (38219)
अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) (12386)
पेट दुखेर अस्पताल पुगेका यी पुरुष गर्भवती भएको रिपोर्ट आएपछि (9055)
सवारी दुर्घटनामा गायक निशान भट्टराईको निधन (5903)